Lalao Android maimaim-poana farany - famoahana, hevitra, fitaka | Androidsis (Pejy 12)
Ny lalao Walking Dead dia azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny
Gaga i Pleasant ny fisehoan'ny The Walking Dead ao amin'ny Play Store. Robert Kirkman izao tontolo izao dia eo an-tananao mba hampiditra ny dikan'ny hoe velona
Kinova Pixel Dungeon vaovao misy feo vaovao, fanatsarana UI ary maro hafa
Ny kinova Pixel Dungeon vaovao dia manome kalitao bebe kokoa amin'ny iray amin'ireo RPG tsara indrindra azonao jerena ao amin'ny Play Store
Ny lalao kifafa ho an'ny Android amin'ny Internet tanteraka
Eto ianao manana ny lalao Broom malaza ho an'ny Android izay mamela antsika hilalao amin'ny Internet mifandimby amin'ny tena mpanohitra mampiasa ny fampiharana.
Monument Valley, vatosoa kely ho tonga amin'ny Android
UsTwo Games dia handefa ny Monument Valley amin'ny herinandro ho avy, endrika iray manontolo amin'ny endrika ambaratonga, aingam-panahy avy amin'ny asan'i Marius Escher.
Godzilla koa dia hanana lalao fampiroboroboana
Pipeworks Software dia mamolavola Godzilla: Smash3 mialoha ny 16 Mey, andro famoahana ilay sarimihetsika vaovao.
NBA 2K14 dia hita amin'ny Play Store ihany
Misy NBA 2K14 ao amin'ny Play Store manomboka anio noho ny fahazoana azy, rehefa lasa dimy volana manokana ho an'ny Kindle Fire.
Tapaho izao ny Rope 2 amin'ny Android
Cut the Rope 2 dia eo amin'ny Android izao mba hahafahanao manandrana mamaha ireo piozila feno fahaiza-manao izay hametraka anao amin'ny fitsapana.
Gameloft dia mandefa ny Captain America: The Winter Soldier amin'ny Android
Captain America: The Winter Soldier dia azo alaina amin'ny Android izao mba hisintomana avy amin'ny Play Store.
New Version of Plants Vs Zombies 2 miaraka amin'ny tontolo futuristic vaovao miaraka amin'ny ambaratonga, zombies ary zavamaniry bebe kokoa
Haavo 24 vaovao, zavamaniry vaovao 8 ary zombie vaovao 10 ao amin'ny kinova vaovao Plants Vs Zombies 2 izay azo alaina ao amin'ny Play Store
Alefaso ny hetsika Adventure Adventure kely Big Big amin'ny Android ampindramin'i DotEmu
Mialà sasatra amin'ny tantara an-tsary sy hetsika atao amin'ny Little Big Adventure amin'ny Android.
Lalao Android efatra nanamarika izany tao amin'ny GDC 2014
Tapitra anio ny GDC 2014 aorian'ny 5 andro nanehoana ny karazana lalao video ho an'ireo sehatra samihafa misy.
Fanavaozana vaovao ho an'ny Dead Trigger 2 miaraka amin'ny maody "Arena of Death" vaovao
Dead Trigger 2 dia iray amin'ireo mpitifitra tsara indrindra azonao jerena ao amin'ny Play Store, ary izay nahazo maody lalao vaovao androany.
Punch Quest dia mety ho iray amin'ireo lalao hitanao amin'ny milina lalao video.
Zombie Gunship dia lasa afaka amin'ny Play Store manomboka androany
Esory zombie an-jatony no ho irakao avy amin'ny fiaramanidina AC-130 mahery ao amin'ny Zombie Gunship, izay azo maimaim-poana izao ao amin'ny Play Store.
Ny fanavaozana izay tonga omaly tao amin'ny Hay Day dia mitondra fiasa vaovao toy ny blender, ny ampondra Andalosiana, ny fanitarana tany maro hafa ary maro hafa.
Ny Amazing Spider-Man 2 dia ho tonga amin'ny volana aprily
Ny Amazing Spider-Man 2 dia aseho sary mahafinaritra mba ho lalao ho an'ny finday toy ny hita amin'ny sary sy ny horonan-tsary.
Ny ady tena zava-misy amin'ny sabatra, tsipìka ary lefona dia tonga amin'ny Android miaraka amin'ny Mount & Blade
Na dia ireo manana konsily Nvidia Shield na takelaka misy solosaina Tegra 4 ihany aza no afaka mankafy ny Mount & Blade.
Ny fanavaozana ny Arena vaovao ho an'ny Dead Trigger 2 amin'ny horonantsary teaser
Horonantsary teaser izay mampiseho ao anatin'ny 30 segondra ny fanavaozana ny Arena manaraka ho an'ny Dead Trigger 2.
Ny RPG Rise of Mana havoaka amin'ity fahavaratra ity avy amin'ny Square Enix
Amin'ity fahavaratra ho avy Rise of Mana ity dia havoakan'ny Square Enix. Titre vaovao ao amin'ny tontolon'ny anthological of Mana saga.
Dikan-teny vaovao ho an'ny Pixel Dungeon misy efitrano tsy misy mahitsizoro, diary am-ponja ary maro hafa
Pixel Dungeon dia iray amin'ireo lalao manokana amin'ny Android izay maimaimpoana tanteraka, tsy misy dokam-barotra sy fividianana ao anatiny.
Tifitra Reaper maizina! dia lalao arcade miaraka amin'ireo singa RPG manan-danja
Tifitra Reaper maizina! dia arcade miaraka amin'ireo singa RPG izay manana sary tsara ary manolotra fanamafisana toetra miaraka amina fananganana 1000 isan-karazany.
Miaina amin'ny faran'ity herinandro ity ny All Star miaraka amin'ny Boom Shaka Laka an'ny NBA JAM
Miaraka amin'ny mety hananan'ny finday finday Android androany, ny lalao toa ny NBA Jam dia hita amin'ny voninahiny sy ny fahalehibiazany.
Ny mistery sy ny ankamantatra ao amin'ny The Room Two dia misy amin'ny Android izao
Ny Room Two dia lalao video iray manokana izay vao tonga tao amin'ny Play Store ary mametraka anao eo anoloan'ny piozila am-polony izay tsy maintsy hamahanao.
Terraria dia havaozina indrindra ho an'ny Andron'ny mpifankatia
Terraria dia lalao iray lehibe ao anatin'ny sokajy Sandbox ary nahazo kinova vaovao izay misy ireo zavatra vaovao sy sarintanin'izao tontolo izao.
Fampivoarana lehibe ho an'ny Andro Hay miaraka amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminao, maodely immersive ary maro hafa
Hay Day androany dia manana kinova vaovao izay mitondra mpifanolo-bodirindrina aminy, izay endri-javatra izay hanitatra ny fahafaha-manao ity lalao mahafinaritra ity.
Battle Towers dia mitondra ny votoatin'ny Warcraft amin'ny Android
Battle Towers dia lalao tetika ara-potoana napetraka ao anatin'ny tontolo antonony iray izay tsy maintsy hitarihanao ny herin'ny tsara mankany amin'ny fandresena.
Lalao 4 hafa avy amin'ny mpamorona Flappy Bird izay mamely ny tranonkala
Flappy Bird dia fahombiazana na aiza na aiza no jerenao. Androany dia lazainay aminao ny fomba ahafahan'ny lalao 4 hafa an'ny mpamorona iray ihany azo idirana amin'ny finday smartphone rehetra.
Minigore 2: Zombies dia miverina ao amin'ny Play Store
Ny vatosoa toy ny Minigore 2: Zombies dia miverina ao amin'ny Play Store maimaim-poana.
Ahoana no hikapohana ny namanao ao amin'ny Flappy Bird
Flappy Bird dia mahazo ny tsotra ho lasa fiankinan-doha ary an-tapitrisany no nametraka izany tao amin'ny terminal.
Manangana $ 50000 isan'andro ny mpamorona Flappy Bird
Flappy Bird dia iray amin'ireo lalao tsotra indrindra hitanao, saingy ny fahasarotana faran'izay sarotra dia ny fanaovana azy ho iray amin'ireo lalao video mahaliana indrindra.
Pixel Dungeon angamba no lalao RPG tsara indrindra amin'ny Android
Pixel Dungeon dia misy fiasa sasany izay toa tsy marina ankehitriny, toy ny hoe maimaim-poana, tsy misy fandoavam-bola kely ary tsy misy alalana rehefa apetrakao.
Robocop dia misy ao amin'ny Play Store ankehitriny
Robocop no lalao sarimihetsika ofisialy noforonin'i Glu Games ho an'ny Android sy iO ary efa hita ao amin'ny Play Store ankehitriny.
Square Enix dia mandefa ny Final Fantasy VI amin'ny Android
Final Fantasy VI dia iray amin'ireo lalao RPG tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra ary efa eo amin'ny Play Store izy io hovidiana.
Eternity Warriors 3 avy amin'i Glu dia hita ao amin'ny Play Store
Eternity Warriors 3 avy amin'i Glue dia navotsotra tamin'ny Android manolotra lalao tsara sy sary mahafinaritra.
Archangel dia lalao fanao Diablo noforonin'ny Unity Games
Raha te hanana Diablo kely amin'ny takelaka findainao na finday avo lenta ianao dia mety i Archangel no safidy hankafizanao lalao fonja tsara.
Sonic Racing Transformed dia mahatratra ny Play Store
Sonic Racing Transformed dia tonga tamin'ny taon-dasa tamina konsol ary efa hita ao amin'ny Play Store ankehitriny hitondra anao hazakazaka karting adala.
Call of Duty: Ekipa fitokonana dia manitatra fitaovana Android bebe kokoa miaraka amin'ny vidiny mihena
Call of Duty: Strike Team dia miantso anao raha manana iray amin'ireo fitaovana vaovao mifanentana ianao ary hankalazana an'io dia nahena hatramin'ny 2,19 € ny vidiny.
Ny lalao Disney rehetra dia nampihena ny vidiny tamin'ny 75% ho an'ny Krismasy
Disney dia nametraka ny lisitry ny lalao manontolo amin'ny Android amin'ny vidiny € 0,49 miaraka amin'ny fihenam-bidy 75% ho azy rehetra.
Ny lalao Android dimy tsara indrindra homena amin'ity Krismasy ity
Anaram-boninahitra dimy izay azon'ireo izay mandray azy ireo ho fanomezana amin'ity Krismasy ity dia hanintona ny tarehin'izy ireo.
Plague Inc. Mutation 7 Azo alaina amin'ny atiny vaovao
Plague Inc dia iray amin'ireo lalao paikady miaraka amina singa apokaliptika miavaka. Manampy atiny misimisy kokoa ny kinova Mutation vaovao.
Turbo, tonga eo amin'ny Android ny sifotra mandalo
Turbo FAST dia lalao napetraka ao amin'ny sarimihetsika DreamWorks Turbo ary anaovan'i Snail ny nofinofiny hitantana ny Indianapolis 500.
Grand Theft Auto San Andreas dia azo alaina ao amin'ny Play Store
Grand Theft Auto San Andreas dia azo alaina ao amin'ny Play Store hovidiana. Ny iray amin'ireo lohateny tsara indrindra amin'ny saga GTA dia azo lalaovina amin'ny Android izao
Dead Trigger 2 dia mahazo fanavaozana lehibe miaraka amin'ny fanomezana fialantsasatra
Dead Trigger 2 dia iray amin'ireo mpitifitra tsara indrindra azonao jerena ao amin'ny Google Play Store ary mampiseho ny mety ho zava-tsarobidin'ny Android.
Fampianarana Android, manazava ny fomba famoronana sy fitantanana emulator na AVD, ny fomba famoronana famaritana ny fitaovana, ary ny fetran'ity teknika ity.
Micropayments amin'ny Android, Scandal amin'ny Angry Birds!
Raha vorona Angry Birds ianao! Atsaharo ny fikosehana ny masonao fa izay heverinao fa tsy mampino dia ny zava-misy madio indrindra, Rovio no manokatra ny macropayments.
Ny lalao fampitomboana ny zava-misy Ingress dia mivoaka amin'ny beta misokatra ihany
Ingress dia lalao fampitomboana ny zava-misy avy any Google izay nivoaka tamin'ny beta misokatra androany ary efa azon'ny rehetra izao.
Sonic the Hedgehog 2 dia tonga amin'ny Android amin'ny ambaratonga vaovao, multiplayer amin'ny Internet ary maro hafa
Sonic The Hedgehog 2 dia havaozina ho an'ny fitaovana finday manolotra fampiasa vaovao sy sary nohatsaraina izay hahafaly an'ireo mpankafy ny saga.
Minecraft Pocket Edition nohavaozina miaraka amin'ny minecarts, nampitombo ny halaviran'ny fandikana ary maro hafa
Minecraft Pocket Edition dia nohavaozina miaraka amina endri-javatra vaovao maro toy ny fitomboan'ny halaviran'ny famaritana, minecart, sakana vaovao ary maro hafa
Ny zavamaniry vs Zombies 2 dia nahazo fanavaozana goavana tamin'ny Turbo Mode, World New, ary maro hafa
Plants vs Zombies 2 dia mahazo fanavaozana lehibe izay mahatonga azy io ho lalao tsara kokoa ary ahafahanao mijery ireo dingana rehetra nefa tsy mandany vola.
Ny kilasika eo amin'ireo kilasika Double Dragon Trilogy misy ao amin'ny Play Store
Double Dragon Trilogy izao dia azo jerena ao amin'ny Android miaraka amina lohateny telo ao anaty iray ary miaraka amin'ny lalao optimisé ho an'ny finday.
Dead Trigger 2 dia mahazo kinova vaovao ary manana iray manokana voaomana amin'ny Krismasy
Dead Trigger 2 dia iray amin'ireo mpitifitra tsara indrindra azonao jerena ao amin'ny Google Play Store ary nahazo kinova vaovao.
Ny Android Colin McRae Rally mahazatra dia tonga amin'ny Android
Iray amin'ireo lalao video mahazatra amin'ny fotoana rehetra ny tsy fisalasalana fa ny Colin McRae Rally, izay hivoaka amin'ny Android amin'ny volana ho avy.
Infectonator - Manafoana ny zanak'olombelona miaraka amin'i Freddy, Jason na JigSaw amin'ny famoronana holocaust zombie
Maimaimpoana ao amin'ny Google Play Store, Infectonator dia hahatonga anao hanana fotoana mahafinaritra, hampiditra horohoro eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'i Freddy Krueger sy maro hafa.
Sega nandefa Sonic Dash ho an'ny Android a Temple Run
Sonic Dash no anaram-boninahitra vaovao natombok'i Sega tao amin'ny Android a la Temple Run, ary manome hery an'izay rehetra nahatonga ny fahombiazan'ny saga.
Grand Theft Auto: tonga any Android i San Andreas amin'ny Desambra
Fahagagana nahazo ilay vaovao hoe Grand Theft Auto: San Andreas tonga amin'ny Android amin'ity volana Desambra ity manomana Krismasy hankafizany azy.
Tantano amin'ny alàlan'ny Hay Day ny toeram-pambolanao
Ny lohateny mifantoka amin'ny toeram-piompiana avy amin'ireo mpamorona Clash of Clans, Hay Day, dia efa nivoaka izao.
Ny tsy fahamarinana: Andriamanitra eo afovoantsika dia tonga amin'ny Android
Ny tsy fahamarinana: Andriamanitra eo afovoantsika dia mampifanaraka ny kinova amin'ny birao amin'ny filalaovana lalao maimaim-poana.
Programa beta ho an'ny Minecraft Pocket Edition ary ny kinova 0.8.0 alohan'ny Krismasy
Mojang dia nandefa ny programa beta ho an'ny Minecraft Pocket Edition ary nanambara kinova vaovao izay ho tonga alohan'ny Krismasy.
Ny Battlefield 4 Commander Gear Companion App ho an'ny Android
Battlefield 4 Commander dia manolotra ny Android ho afaka ho komandà ary hitarika ny mpiara-miasa aminao handresy.
Tonga ao amin'ny Android ilay King of Fighters 97 mahazatra
King of Fighters 97 dia misy koa maodely marobe hamerenana ny lalao azontsika nankafizina nandritra ity fotoana ity.
Farming Simulator 2014 dia azo alaina ao amin'ny Google Play miaraka amin'ny mode multiplayer izao
Farming Simulator 2014 dia mampiseho ny asa tsara ataon'ny vondrona fampandrosoana ao ambadik'ity simulator tsara ho an'ny Android ity.
Football Manager Handheld 2014 dia mametraka anao mivantana amin'ny kirarin'ny mpanazatra avy amin'ny orinasa malaza Sega.
Ny GT Racing 2 dia tonga ao amin'ny Google Play amin'ny endriny feno miaraka amina fiara maro hisafidianana sy fomba maodely marobe.
Lalao navoaka taona vitsivitsy lasa izay tao amin'ny XBLA sy PSN satria Tank Battles no farany avy amin'ny Gameloft.
Candy Crush Saga dia nipoaka tao amin'ny Facebook, Android ary iOS tamin'ity taona ity ho lalao iray izay azon'ny mpianakavy atao rehetra.
Thor: Mivoaka izao ny Maizina
Gaga i Thor: The Dark World tonga tamin'ny Android, herinandro alohan'ny namoahana ilay sarimihetsika tany Etazonia.
DotEmu dia mamindra ny trilogy Double Dragon mankany Android
Double Dragon, iray amin'ireo milina kilalao horonantsary taloha, dia ho tonga amin'ny Android noho ny DotEmu miaraka amin'ny trilogy ao amin'io lohateny io ihany.
Lalao dimy mampatahotra amin'ity alin'ny Halloween ity
Plants vs Zombies 2, Kingdom Rush Frontiers, Dead Trigger 2, Terraria ary Plague Inc dia lalao mampatahotra dimy izay hiaraka aminao amin'ny Halloween.
Damn Castilla dia efa any OUYA
Damn Castilla de Locomalito dia efa any OUYA
Ny saga Star Wars malaza dia tonga amin'ny Android miaraka amin'ny Tiny Death Star [Download APK]
Ny lalao Star Wars vaovao dia tonga amin'ny Android miaraka amin'ny Tiny Death Star, simulator fananganana an'i Mogabe malaza sy ny Tiny Tower.
Call of Duty: Strike Team, mivoaka izao
Afaka mankafy ny Call of Duty amin'ny findainao na amin'ny takelakao ianao izao. Call of Duty: Strike Team dia efa nivoaka izao.
Dead Trigger 2 dia azo alaina amin'ny Android izao
Dead Trigger 2 dia azo alaina amin'ny Android izao, ny tohin'ilay mpitifitra malaza dia azo sintonina sy apetraka ao amin'ny Google Play.
Plants VS Zombies 2 izao dia azo sintonina
Farany dia tonga ny ampahany faharoa ary nandrasana hatry ny ela ny zavamaniry Plants VS Zombies. Miaraka amin'ny Plants VS Zombies 2 dia hankafizinao ity lalao hetsika manaitra indroa ity indroa.
Electronic Arts dia miasa amina kinova Battlefield for Android sy iOS
Electronic Arts dia te-hanao fiatraikany amin'ny Battlefield malaza ho an'ny sehatra samihafa toa ny Android sy iO, manavao ny fampidirana azy ireo.
Ny kinova Plague Inc. manaraka misy ny tena aretina sy ny universer alternate
Plague Inc dia iray amin'ireo lalao izay nisy fiatraikany farany tato ho ato tamin'ny alàlan'ny fanolorana ny paikady amin'ny fomba hamoronana virus izay mamongotra ny zanak'olombelona.
Clash of Clans dia tonga amin'ny Android
Clash of Clans dia kilalao paikady mahaliana kokoa izay tonga amin'ny Android aorian'ny diany amin'ny iOS.
Total Conquest, ny paikady Gameloft mahazatra
Gameloft dia miditra amin'ny paikady mahazatra miaraka amin'ny Total Conquest.
Navoaka tamin'ny Android ihany ny Kingdom Rush Frontiers
Kingdom Rush Frontiers dia iray amin'ireo lalao fiarovana tsara indrindra an'ny Android, vao nivoaka androany ary afaka mividy amin'ny Google Play ianao.
Rehefa afaka roa taona dia tonga ny FIFA 2014 ho an'ny Android
Taorian'ny roa taona niandrasana dia nanapa-kevitra ny EA Sports hanatsara ny lalao fifa fatratra 2014, maimaimpoana tanteraka ao amin'ny Google Play
Little Big City, fananganana Gameloft
Little Big City no tolo-kevitr'i Gameloft momba ny fananganana sy fitantanana.
Ny lalao sy fampiharana WTF be indrindra !!! (lalao adala ambony)
Izahay dia hampiseho ny lalao WTF (moana) be indrindra izay hahagaga anao indrindra fa tsy satria manana kalitao sary maro ...
Zavamaniry vs. Zombies 2 dia ho tonga amin'ny Android amin'ity fararano ity
Ny tranga tamin'ny taona, Plants vs. Zombies 2, dia avy amin'ny tanan'ny EA sy Popcap mankany Android.
Tonga tao amin'ny Android ihany i Terraria nony afaka Minecraft fa tamin'ny 2D
Terraria no Minecraft fa ao amin'ny 2D, tontolonao manokana izay hanombohanao ny traikefa nahafinaritra anao mamorona sy miady amin'ireo karazana biby goavambe rehetra.
Ny rahalahin'i Profesora Layton dia ao amin'ny Android ankehitriny
Ny lalao voalohany dia tonga amintsika avy amin'ny tanan'i Level5 izay lalaovin'i Alfendi Layton, rahalahin'ny profesora angano.
Ny Real Racing 3 dia mandray ny fiara hozatra miaraka amin'ny DLC vaovao
Real Racing 3 dia nahazo DLC starring American Muscle Cars.
Ny Layton 7 hafahafa dia ho tonga amin'ny Android
Layton 7, ny vaovao farany amin'ny Level 5, dia ho tonga amin'ny iOS sy Android.
Fanaraha-maso lalao Android vaovao roa avy amin'ny MOGA
MOGA dia efa nandidy mialoha ny hifehezana lalao roa lehibe ho an'ny fitaovana Android antsoina hoe Moga Hero Power sy Moga Pro Power.
«Papers, azafady» dia hifarana amin'ny Android
Ny anaram-boninahitra an'i Lucas Pope, "Papers, azafady" dia hanana kinova Android.
Konami's Contra: Evolution dia eo amin'ny Android izao
Tonga ny NES Contra kilasika miaraka amin'ny famerenany Contra: Evolution.
Masoandro, volana ary kintana amin'ny kinova vaovao 0.7.3 an'ny Minecraft Pocket Edition
Dika vaovao ho an'ny Minecraft Pocket Edition ho an'ny Android, izay mitondra fanatsarana hita toy ny masoandro, ny volana ary ny kintana hankafizanao bebe kokoa.
Nosy Playstation All-Stars Island, ny lalao Sony sy Coca-Cola
Ny Nosy All-Stars Playsation dia ny firaisana amin'i Sony sy Coca-Cola nanao lalao video.
Rescue Boo ao amin'ny Monsters Inc. Run
Ireo biby goavambe Sully sy Mike dia mbola mitady Boo ao amin'ny Monsters Inc. Run.
Excalibur, MMO mihodina amin'ny sisiny
Ny vaovao indrindra avy amin'ny R2Games, Excalibur, dia mampivondrona ny MMO RPG miaraka amin'ny fomba fijery 2,5D.
Riptide GP2 dia misy izao
Vector Unit dia mivarotra ny fizarana vaovao indrindra amin'ny fizahan-tany momba ny hazakaza-drano, Riptide GP2.
Ilay Maty Mandehandeha: Fanafihana, zombie miaraka amina paikady
Ao amin'ny karazana iray nohararaotina toy ny an'ny zombie, The Walking Dead: Fanafihana dia mahay manavaka ny tenany.
Larice Suit Larry: Navoaka indray izao
Replay Games dia namoaka ny famerenanana ny kilalao, Leisure Suit Larry: Reloaded.
Ittle Dew, Zelda ho an'ny Android
Ittle Dew, lalao mitovy amin'ny kilalao Zelda novolavolain'i Ludosity, efa hidina.
Drafitra ho avy sy kinova vaovao an'ny Minecraft Pocket Edition
Fampivoarana vaovao an'ny Minecraft Pocket Edition miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazany sy ny fanamboarana bibikely, miampy ny fampisehoana drafitra ho avy ho tontolo tsy manam-petra
Lalao vaovao avy any Kairosoft, Pocket League Story 2 miaraka amin'ny mode multiplayer
Kairosoft, orinasa iray fanta-daza amin'ny famoronana lalao simulation, fananganana ary rpg lehibe, dia miseho miaraka amin'ny Pocket League Story 2.
Magic 2014: Misy ny duels an'ny Planeswalkers ankehitriny
Ny franchise carte de crédit legendary dia manana ny lohateny vaovao amin'ny Android, Magic 2014: Duel of the Planeswalkers.
Heroes of Order & Chaos, Gameloft's MOBA, nahazo fanavaozana
Heroes of Order & Chaos, ny MOBA avy amin'ny Gameloft, dia hahazo fanavaozana amin'ny andro ho avy. Ny antsipirihanao amin'ny horonan-tsary.
Despicable Me 2 koa dia manana lalao ofisialy
Despicable Me 2 koa dia manana lalao finday, hazakazaka tsy misy farany antsoina hoe Minion Rush.
Ny boaty fasika vaovao an'i Gameloft, Gangstar Vegas, dia azo sintonina izao.
Might & Magic: Clash of Heroes, amin'ny Android ihany koa
Might & Magic: Tonga amin'ny terminal Android ihany ny fifandonana amin'ny Maherifo.
Tonga amin'ny Android ny Age of Empires
Microsoft dia hamoaka kinova finday ho an'ny Age of Empires, ao anatin'izany ny iOS sy Android.
Square Enix dia mandefa Drakerider amin'ny Android
Square Enix dia manohy manohana ireo fitaovana finday ary mandefa Drakerider.
Gangstar Vegas dia efa elaela tao amin'ny iOS. Raha mikasika ny Android dia afaka mahafantatra bebe kokoa momba ny lohateny isika
LEGO Star Wars: nivoaka izao ny Yoda Chronicles
Aorian'ny fihenam-bidy amin'ny terminal Xperia, LEGO Star Wars: Ny Yoda Chronicles dia misy izao.
Ady tena izy eo amin'ny robot ady totohondry noho ny CloudRobot
Ny robot robot an'ny Cloud Robot dia hita ao amin'ny E3, ilay fivoriambe voalohany amin'ny lalao video. Ady eo amin'ny tena robot ady totohondry.
Fanavaozana be dia be ny Fruit Ninja Free miaraka amin'ny mode multiplayer eo an-toerana sy sabatra vaovao, fiaviana ary voankazo maro kokoa
Fanavaozana goavana ny Fruit Ninja Free izay fahafinaretana apetraka, mitondra mode multiplayer vaovao eo an-toerana, sabatra vaovao ary hery manokana.
Fampivoarana vaovao an'ny Minecraft Pocket Edition misy mpizara Realms, cubes, afo ary maro hafa
Afo, atody, ronono, mofomamy, cubes, jiro malefaka, chat, menus vaovao ary ny kinova alpha an'ny Minecraft Realms amin'ny andiany 0.7 an'ny Minecraft Pocket Edition.
Ny Plague Inc Mutation 1.6 dia hamindra amin'ny Android indray amin'ny volana Aogositra
Plague Inc Mutation lalao iray izay gaga ny olona eo an-toerana sy ny olon-tsy fantatra dia hitondra amin'ity fahavaratra ity, izay azo atao hamongorana ny zanak'olombelona amin'ny planeta.
Kingdom Rush amin'ny farany misy amin'ny Android, lalao Tower Defense mahatahotra
Kingdom Rush, lalao mahatalanjona sy mampiankin-doha izay tonga amin'ny Android ihany, nomena lalao izay tsy azontsika tamin'ny karazana Tower Defense
10 tapitrisa kopia amidy Minecraft Pocket Edition
Ny firaketana an-tsoratra, ny Minecraft Pocket Edition dia mahavita mihoatra ny tarehimarika 10 tapitrisa amidy amin'ny dika findainy.
Zombie HQ fahombiazan'i Ios amin'ny Android
Lalao velona Zombie HQ izay hizaha toetra ny fahaizantsika miady amin'ny apokalypsy zombie
Angry Birds Friends misy amin'ny 2 Mey ao amin'ny Play Store
Angry Birds Friends dia tonga amin'ny Android miaraka amin'ny maody an-tserasera vaovao hahafahantsika miatrika fanamby ireo namantsika Facebook
Lalao varotra mamelombelona an'i Leviathan Warship amin'ity fahavaratra ity
Lalao varotra mifototra amin'ny fifandimbiasan'i Leviathan Warship miaraka amina lalao efatra, fomba fiaraha-miasa, an-tserasera, an-tserasera ary fampielezana.
Alien vs Predator Evolution, ny ady an-habakabaka dia tonga amin'ny finday
Fitsangatsanganana an-habakabaka feno rà avy amin'ny franchise Alien vs Predator
Gamestick - ny lalao video console ho an'ny Android
Ny Gamestick dia rindrambaiko mpanara-maso sy lalao video amin'ny fotoana iray, izay natokana manokana ho an'ny Android.
Monster Hunter dia manana ny dikanteniny manokana amin'ny Android
Ny saga Monster Hunter an'ny fihazana biby goavambe dia tonga miaraka amin'ny kinova manokana ho an'ny Android
BlueStacks emulator tonga amin'ny Windows 8
BlueStacks dia emulator mahery amin'ny fampandehanana fampiharana Android izay miasa amin'ny Windows 8 izao
Moga Pro - Mpandrindra lalao Android vaovao
Miaraka amin'ny Moga Pro dia atolotra izy ireo mba afaka hifanerasera mahomby kokoa amin'ny lalao video Android sy amin'ny alàlan'ny fifandraisana Bluetooth.
Fanolorana fanomezana (VI): «Mila haingam-pandeha: tadiavina indrindra»
Ny andiany fahafito amin'ny Lalao fanomezana dia mifantoka indray amin'ny familiana, averintsika jerena ny filana ny hafainganana: ny tadiavina indrindra.
Fanolorana fanomezana (III): "The Dark Knight: The Legend Rises"
Fanaterana lalao vaovao homena. Androany "Ny Knight Knight: teraka indray ny angano".
Monopole Millionaire, kinova haingana amin'ny lalao kilalao mahazatra
Monopoly Millionaire dia kinova vaovao, haingana sy mavitrika kokoa amin'ny lalao mividy sy mivarotra birao fananana mahazatra, vonona ny hiatrika ny fanamby ve ianao?
Andiana fanomezana (II): NOVA 3
Androany, amin'ny andiany faharoa amin'ny lalao hanomezana dia mitondra anao izahay NOVA 3, FPS mikorontana sy mahatalanjona.
Ireo tafavoaka velona, ​​manomboka amin'ny fifaninanana fahitalavitra ka hatramin'ny Android Game
Ireo tafavoaka velona dia avy amin'ny fahitalavitra mankany amin'ny Play Store amin'ny maodely lalao maimaimpoana tanteraka, miaraka amin'ireo fitsapana entanin'ny programa malaza sy ny lalao an-tserasera
Andiana fanomezana (I): Toerana maty
Izahay dia mamakafaka ny lalao finday amin'ilay saga Dead Space. Iray amin'ireo mpikapoka mavesatra ho an'ny Android.
My Little Pony dia tonga amin'ny Android amin'ny endrika lalao video
Ny trangan-javatra amin'ny Internet, My Little Pony: Friendship is Magic, dia efa manana lalao amin'ny Android.
Wreck it Ralph!, Ilay sarimihetsika Disney, dia manana ny lalao ao amin'ny Android ankehitriny
Ny lalao video ofisialy ho an'ny sarimihetsika sarimihetsika Disney ho avy, Wreck-It Ralph!, Dia azo alaina ao amin'ny Google Play Store.
The Hobbit: Azo ampiasaina izao ny Fanjakan'ny afovoany-tany
Ny Hobbit, ankoatry ny trilogy sarimihetsika, dia hanana lalao maro. Androany isika dia miresaka momba ny kinova ho an'ny Android.
Angry Birds Star Wars famerenana
Izahay dia mitondra anao ny fanadihadianay ny Angry Birds Star Wars.
Angry Birds Star Wars Fampitana farany
Ny Angry Birds Star Wars dia akaiky ary mampiseho amintsika ny lalao sy ny karazam-borona.
SaveShare, ny lalao ao amin'ny rahona
Te-hihary ny fandrosoan'ny lalao video-nao ao anaty rahona ve ianao ka ho afaka hanaraka azy amin'ny fitaovana hafa? SaveShare mamela izany.
Zombiewood izao dia afaka maimaim-poana ao amin'ny Google Play
Gameloft dia nanangana ny Zombiewood, ilay lalao fihetsika vaovao izay mitondra antsika any an-tanànan'i Los Angeles handrava ireo zombie maro be.
Haunted Hogs, ilay fizarana vaovao an'ny Angry Birds Seasons
Angry Birds Seasons dia manomboka amin'ny fizarana vaovao miorina amin'ny fialantsasatra amin'ny Halloween, mampatahotra ary mihetsika miaraka amin'ireo vorona Android tianao indrindra
Real Football 2013, ny baolina kitra tsara indrindra amin'ny Android anao
Real Football 2013 dia lalao maimaim-poana vaovao avy amin'i Gameloft izay tsy maintsy andraikitsika amin'ny fitarihana ekipa baolina kitra hatramin'ny farany ambony
Tonga eto ny Real Football 2013
Ny ampahany farany amin'ny saga baolina kitra novolavolain'i Gameloft ary Falcao no sary, Real Football 2013.
Fampiharana Halloween amin'ny Android miaraka amin'i Charlie Brown sy ny namany
Mankalazà ny Halloween amin'ny endriny amin'ny Android misy anao miaraka amina voatavo lehibe, Charlie Brown miaraka amin'ny toetran'ny Snoopy (voanjo)
Beastie Bay, ny «pokémon» an'ny Kairosoft
Beastie Bay, ho fanampin'ny fampahatsiahivana Pokémon ao amin'ny rafitry ny lalao, no lalao maimaim-poana voalohany an'ny Kairosoft ho an'ny Android.
Tonga any amin'ny Where's My Perry ny ambaratonga vaovao?
Aiza ny Perry-ko? raiso ny feo amin'ny teny Castilian nalaina tamin'ny andian-dahatsoratra sy ny ambaratonga vaovao 20 amin'ny fanavaozana azy 1.1.0
Aiza ny ranoko? Mahazo ambaratonga aingam-panahy avy amin'ny Frankenweenie manaraka
Aiza ny ranoko? Mahazoa ambaratonga vaovao aingam-panahy avy amin'ny sarimihetsika sarimihetsika Disney ho avy, Frankenantaraie.
Farany, Jetpack Joyride ho an'ny rehetra!
Ny iray amin'ireo lalao mahafinaritra avy amin'ny Halfbrick Studios, Jetpack Joyride, dia nahatratra ny mpampiasa Android rehetra tamin'ny farany.
Ny hoavin'ny lalao video Android sy ny console amin'ny birao
Ny lalao video amin'ny Android dia manamarika ny hoavin'ny indostria, lalao vaovao, sary matanjaka kokoa ary sary futuristic eo am-pelatananao
Zombie Panic in Wonderland dia tonga amin'ny Android
Aorian'ny fandalovany amin'ny WiiWare sy iOS, Zombie Panic in Wonderland dia ho tonga amin'ny Android.
Metal Gear Solid: tranofiara Ops sosialy
Hitanay ny fiasan'ny Metal Gear Solid: Social Ops, lohateny voalohany ho an'ireo sehatra finday ao amin'ilay saga noforonin'i Hideo Kojima.
Ny Glu Mobile dia niala tamin'ny Eternity Warriors 2 ka hatrany amin'ny Enchant U, fiovana mahery vaika. Te hahita izany ve ianao? Hamaky bebe kokoa.
Tsy maintsy namakivaky ny XBLA, Ps3 ary ny iOS hahazoana ny Android, saingy efa afaka mankafy ny Prince of Persia isika.
Marvel: Avengers Initiative dia manomboka amin'ny Hulk
Ny Avengers dia tonga amin'ny Android avy amin'ny tanan'i Marvel: Avengers Initiative
Nanambara ny fihodinan'ny profesora Layton ho an'ny Android
Ho tonga amin'ny iOS sy Android ilay profesora malaza Layton sy ny mpianany Luke, mpihetsiketsika amin'ny lalao DS marobe.
Metal Gear Solid: Ops manokana ho avy amin'ny Android
Afaka mankafy ilay saga noforonin'i Hideo Kojima tao amin'ny Android izahay noho ny Metal Gear Solid: Ops manokana
Tonga any amin'ny Dead Trigger ny fikirana sy ny atiny vaovao
Tonga hatrany amin'ny Dead Trigger ny atiny vaovao. Manome tsipiriany momba izay mitondra ny fanavaozana farany azy izahay.
Alien vs. Predator, tonga tany Android ny ady vahiny
Alien vs. Predator ny lalao hetsika vaovao izay tsy maintsy hahitantsika izay hazakazaka vahiny matanjaka kokoa
Sony tsy hitondra lalao PSX amin'ny telefaona PlayStation Certified
Ary farany tsy hitondra lalao PlayStation 1 ho an'ny telefaona PlayStation Certified i Sony
Monster Life, atsangano ny monster-nao amin'ny Android
Monster Life dia lalao Gameloft vaovao ho an'ny Android izay ahafahantsika mamorona sy mampiofana ireo biby goavambe hiadivantsika
Zombie Ops Mainty ho an'ny Android
Tonga ao amin'ny Android ny Black Ops Zombies hanolotra traikefa FPS tsy mampino amin'ny lalao an-tserasera
AR Magical Battle, fampitomboana ny zava-misy ary fiarovana miaraka amin'ny tilikambo
Lalao vaovao nampitombona vaovao ho an'ny Android miaraka amin'ireo singa mpiaro ny tilikambo
Asphalt 7 sy ny Dark Knight Rises, lalao Android tsy maintsy hita
Ny sasany amin'ireo lalao Android vaovao hanomboka amin'ny volana Aogositra amin'ny fomba lehibe
Fanadihadiana maty momba ny trigger
Izahay dia mijery ny farany amin'ny Madfinger Games. Dead Trigger dia lalao mahitsy sy mampiala voly, tsy mendrika.
Ouya, ho avy tsy azo antoka
Nanomboka nikapoka mafy dia mafy izy, saingy toa nihena ny fisehoan-javatra tao Ouya.
Broken Sword: azo alaina ho an'ny Android izao ny fanapahana ny talen'ny direktera!
Broken Sword: Navoaka ho an'ny Android ihany ny Cut's Director tamin'ny farany tamin'ny alàlan'ny sary HD nohatsaraina sy ny fitantarana tantara vaovao
Max Payne Mobile, tonga tany amin'ny Android ilay mpitsongo
Detective Max Payne sy ny tantaran'ny valifaty sy ny fahafatesana dia tonga amin'ny Android miaraka amin'i Max Payne Mobile, fanontana fanontana deluxe an'ny lalao voalohany.
Final Fantasy Dimensions, ny andraikitra tsara indrindra dia ny Android
Ny saga malaza amin'ny RPG RPG Final Fantasy Japoney dia tonga amin'ny Android miaraka amin'ny Final Fantasy Dimensions, lohateny misy singa nentanin'ny FF I, IV ary V
Nyko dia manomana mpanara-maso vaovao amin'ny lalao Android
Nyko dia nanambara ireo mpanara-maso PlayPad vaovao natao ho an'ny lalao Android izay mampiasa ny chip NVIDIA Tegra ary mitaky ny marina.
Mini Motor Racing dia lalao hazakaza-tena teknika miaraka amin'ny lalao mampiankin-doha ahafahantsika mifaninana amin'ny hazakazaka amin'ny namana 4
Apalabrados, ny lalao alaina indrindra amin'ny Play Store
Apalabrados no lalao malaza indrindra amin'ny Android, lalao mamorona teny amin'ny fomba madio indrindra amin'ny Scrabble malaza hilalao amin'ny Internet.
Aiza ny ranoko? lalao ankamantatra miaraka amin'ny tombo-kasen'i Disney
Aiza ny ranoko? lalao piozila miaraka amin'ny mazika sy ny endrik'i Disney animated izay hitarihantsika ny rano amin'ny ambaratonga an-jatony.
Zombie Lane, apokalypsy zombie amin'ny Android
Arovy ny manodidina anao ary aringano ny zombie ao amin'ny Zombie Lane, fampifanarahana tsara amin'ny lalao Facebook izay hiadiantsika tsy mitsahatra.
Ice Age Village, tonga ao amin'ny Android ireo maherifon'ny The Ice Age
Ice Age Village no lalao Android vaovao avy amin'ny Gameloft, entanin'ny aingam-panahy avy amin'ny sarimihetsika Ice Age
Ry bandy tonga lafatra: mamorona karome tsy azo atao milalao baskety
Dude Perfect dia mampiasa mekanika mitovy amin'ireo virtuosos izay manao basikety avy amin'ny fiaramanidina, metatra am-polony ary mamorona karôma tsy azo atao
Tank Riders: fenoy ny nofinofy zanakao ary ento ny tanko anao
Tank Riders dia lalao iray izay tsy tokony hanjavona amin'ny Android-nao, miaraka amina lohahevitra tsotra nefa mahafinaritra azontsika atao ny mankafy ny maody fampielezan-kevitra sy ny maody marobe.
Super Monkey Ball 2: Fanontana Sakura misy amin'ny 0,90 cents (Fotoana voafetra)
Ny SEGA dia nanampy fanindroany indray ho an'ny Android, Super Monkey Ball 2: Edition Sakura ho an'ny 0,90 euro cents amin'ny fotoana voafetra.
Ny Angry Birds Space dia ofisialy izao.
Amin'ity fizarana vaovao ity, izay ho lalao vaovao fa tsy fanitarana, ireo vorona manintona ireo dia miditra amin'ny habakabaka. Ny lohahevitry ny lalao dia mitovy amin'ny mahazatra hatrany, manipy ny vorona avy eo amin'ny antsamotady ianao ary tsy maintsy mamely ireo kisoa mpangalatra atody. Ao amin'ny Angry Birds Space ihany no hisy antsika eny amin'ny habakabaka, noho izany dia tsy maintsy jerentsika ihany koa ny hery misintona sy ny fizika vaovao. Ny gravitasi dia hanome ny lalao gameplay. Ho hitantsika ireo asteroid sy planeta izay ny gravitite dia hampiala ny voron-tsika amin'ny làlan-kalehany ary hanintona azy ireo, vorona, kisoa ary ireo singa rehetra hita eo amin'ny efijery.
Qualcomm Snapdragon GamePack vavahady lalao vaovao
Qualcomm Snapdragon GamePack vavahady lalao vaovao izay hanomboka amin'ny lalao vaovao efatra, Virtua Tennis Challenge, Fanjakan'ny amira, The Reem, The Ball
Monster Shooter: antoka azo antoka amin'ny felatananao
Monster Shooter dia lalao mahafinaritra be indrindra miaraka amin'ny sarimiaina an-tànana hananganana antsika amin'ny toerana misy sary sy fahitana mahavariana
Fanavaozana: Baseball Superstars 2012 maimaimpoana ho an'ny Android
Gamevil dia nanavao ny Baseball Superstars 2012 tamin'ny fanatsarana vaovao tena miavaka amin'ny sary sy amin'ny lalao, azonao atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny tsena android
Village Smurf: The Smurf Village amin'ny Android-nao
Ny mpilalao manga rehetra hatramin'ny fahazazanao dia tonga amin'ny Android! Ho azonao atao ny mahatadidy ny tanànan'ny pifufos amin'ny Android anao mba hampitomboana sy hampiroborobo azy.
CPSEmu: Maka tahaka ny lalao Capcom mahazatra amin'ny Android-nao
CPSEmu emulator ho an'ny fitaovana Android rehetra, azonao atao ny milalao kilalao toy ny Street Fighter amin'ny findainao finday nefa tsy manana solosaina matanjaka.
Rahona sy ondry: Karakarao ny andian'ondrinao avy amin'ny Android
Clouds & Sheep dia lalao iray am-boalohany misy tantara mahafinaritra, afaka mikarakara ny ondrintsika manokana isika, manome sakafo azy ireo, mampitombo azy ireo
Zenonia 4: Fiverenana ny angano ho an'ny Android
Zenonia 4 dia miverina amin'ny Android amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny sary sy sary tsara kokoa, rafitra PVP nampiana ary zava-bita vaovao azo tratrarina
CupidPuzzle, fanomezana mety indrindra amin'ny Andron'ny mpifankatia
Fetin'ny mpifankatia no andro tsara indrindra hanehoana amin'ny olon-tianao fa tianao izy, saingy raha ...
My Plane Plane 3: azonao atao izao ny manidina ny fiaramanidinao taratasy
Wavecade dia namoaka fahombiazana hafa ho an'ny Android, lalao mahafinaritra antsoina hoe My Paper Plane 3 miaraka amin'ny tontolo 3D izay tsy maintsy ataontsika manidina fiaramanidina taratasy
Drag Racing: Ho an'ny junkies hafainganana
Ankehitriny amin'ny Android anao dia afaka mifaninana amin'ny fiara hafa ianao ao amin'ny Drag Racing, lalao hafa noho ny mahazatra antsika, ny fiankinan-doha ary ny fifaninanana amin'ny lalao iray ihany
Ny NightClub Story dia tonga indray avy amin'ny tanan'ny TeamLAVA ho an'ny Android
TeamLAVA dia nahatratra fahombiazana tamin'ny varotra iray indray noho ny rafitry ny lalao an-tserasera, ao amin'ny NightClub Story dia afaka mamorona toerana fanaovana kliobantsika manokana isika
Vaovao ho an'ny mpilalao (I). Milalaova ny PSP amin'ny Android?
Sony dia nahatsikaritra ity fitomboan'ny indostrian'ny lalao video ity. Efa nanao izany tamin'ny famoahana ny Xperia Play, fampahafantarana ny foto-kevitry ny "console-phone" ary izao dia manao azy indray. Hatramin'izay, Sony dia hamoaka kinova amin'ireo lalao video PSP ho an'ny fitaovana Android iray manontolo.
Sonic 4: Tonga amin'ny Android ny kilasika
SEGA dia namoaka kilasika hafa ho an'ny Android, ilay hedgehog manga malaza indrindra amin'ny tantara miverina ho an'ireo finday finday Android
SpyMouse totozy kely misy fiantsoana ho mpitsikilo
SpyMouse dia totozy kely izay entin'ny Electronic Arts, ity totozy ity dia andevozin'ny fromazy ary hapetraka amin'ny trano mihoatra ny 70 hahatratra ny tanjony
Vanim-potoana vorona romotra sy ny taonan'ilay dragona
Manomboka amin'ity faran'ny herinandro ity dia misy ny fanavaozana ny Angry Birds Season, izay hankalazana ny Taom-baovao Sinoa ireo vorona mpinamana ireo ary ny ratsy indrindra hivoaka amin'ity fankalazana ity dia ny kisoa toy ny mahazatra.
Ny lalao miaraka amin'i Tegra 3
Famakafakana kely amin'ireo lalao izay fantatsika fa izao dia hahatratra ireo fitaovana Android izay manome an'i Tegra 3
Fandinihana lalao Little Little War, ny ady any am-paosinao
Iray amin'ireo sary tsara indrindra sy lalao tetikady mahatsikaiky indrindra amin'ny Android Market,
Destinia, Famakafakana lalao
Ny RPG tsara dia ao amin'ny Android ihany koa.
New Angry Birds vanim-potoana Halloween
Ny fampahalalana rehetra momba ny fanavaozana Angry Birds vaovao
Na dia voatsikera be aza ny Sony Ericsson Xperia Play smartphone / lalao video console taorian'ny nanombohany, ny marina dia ...
FIFA 12, natokana ho an'ny Android.
Sixaxis Controller: Milalaova amin'ny fifehezana tsy misy tariby amin'ny Android-nao.
Lalao miavaka navoaka ho an'ny Sony Ericsson Xperia Play
Mamoaka lalao manokana ho an'ny Sony Ericsson Xperia Play izy ireo.
Sony te hanana lalao manokana ho an'ny Xperia Play
Nampahafantatra ampahibemaso ny fikasany i Sony hamorona mpamorona lalao video hamorona lalao manokana ho an'ny smartphone Xperia Play.
Ny lalao Guerrilla Bob, avy amin'ny orinasa Angry Mob Games, dia navotsotra ho an'ny rafitra fikirakirana finday Android.
famerenana ny lalao ho an'ny Torero android
Gameloft dia manambara lalao 10 ho an'ny Xperia Play
Ny lalao Gameloft voalohany dia ho hita amin'ny Xperia Play amin'ny andro namoahana azy
Kongregate Arcade, fampiharana lalao Flash maimaim-poana ho an'ny Android
Misaotra an'i Kongregate Arcade afaka milalao lalao mihoatra ny 300 amin'ny Internet ianao ary mankafy ny fanangonana kilalao Flash maimaim-poana lehibe indrindra ho an'ny telefaona finday, izay hitombo isan-kerinandro
World of Dragons MMORPG, lalao multiplatform azo alaina amin'ny Android
World of Dragons, ny MMORPG multiplatform voalohany, novolavolain'i CorsairBand. Eny, rehefa namaky ianao dia maro karazana endrika ity lalao ity ary azonao atao ny milalao azy amin'ny solosainao (amin'ny alàlan'ny tranokala), avy amin'ny Facebook na amin'ny telefaona Android anao
Videogames, lesoka Android lehibe indrindra?
Fa maninona no tsy misy mihetsika amin'ny lalao fandaharana toa an'Andriamanitra nokasaina ho an'ny Android? Izay ananan'i Google amin'izao fotoana izao ao amin'ny tsenany dia lalao tena mahafinaritra nefa tsotra.
Ny lalao Hero of Sparta ho an'ny Android maimaim-poana mandritra ny 22 Desambra rehetra
Gameloft dia manohy ny fampielezana fanomezana azy ary amin'ity indray mitoraka ity dia anjaran'ny lalao Android Hero of Sparta.
Tonga amin'ny Android ny halaviran'ny lalao lehibe, halahelo azy ireo ve ianao?
Ny avalanche misy lohateny lalao lehibe dia tonga amin'ny rafitra fiasa Android, sary mahafinaritra, vokatra lehibe, tonga ilay seho